पैसा र पिआर ले पखालेको चरित्र - Ek Jamarko
Home / कथा / पैसा र पिआर ले पखालेको चरित्र
पैसा र पिआर ले पखालेको चरित्र
"चरित्र नाप्ने कसी हुदैन
आफ्नै भाग्य लेख्ने मसी हुदैन" ..!
कुनैदिन आफैले लेखेका पंक्ति हरु याद आईहरेछन आज । चरित्रको बारेमा ठुला ठुला बहस हुने गर्छन हाम्रो समाजमा । चरित्रमा खोट देखाउदै कतिपय घरबाट तोडिईरहेछन । कतिपय मुद्दा हरु प्रहरी चौकी र अदालतमा घुमिरहेछन । चरित्र लाई यौन संग जोडेर बुझ्ने परम्परा छ नेपालमा । यौनांगको जथाभावी प्रयोग गर्ने लाई चरित्रहीन भनिन्छ सरासर भन्दा । अनी त्यही यौनांग को ईच्छा विपरीतको प्रयोग लाई हिंसाको रुपमा पनि हेरीन्छ हाम्रो मुलुकमा । लोग्ने फेर्ने नारी त यसै समाज बाट तिरस्कृत हुन्छीन नै पर पुरुष संग हासेर बोल्ने महिला समेत चरित्र हिन ठहरीन्छीन यहा ।
तर नेपालमा भन्दा त विकसीत भनिएका देश हरुमा बसोबास गर्ने नेपाली नारी हरु बढी पिडीत रहेको पाईयो यौन र सम्वन्ध का हिसाव ले ।यती सम्मकी जुन किसीमको सम्वन्ध लाई नेपालमा हाडनाता अथवा हिंसाजन्य भनेर दण्डीत गरीन्छ विकशीत मुलुकमा रहेका नेपाली हरुले त्यस्ता सम्वन्ध लाई सामान्य रुपमा लिने गरेको पाईयो । संबन्ध लाई नाफा नोक्सान संग तुलना गरेर जोड्ने र तोड्ने गर्ने गरेको पाईयो । नाफा नोक्सानको लागी सम्वन्ध फेर्ने हरुलाई वेश्याको ट्याग भिराईन्छ हाम्रो समाजमा तर विदेशीएको हाम्रै समाजले ति सबै कुरा साधारण रुपले पचाउदो रहेछ ।
कहा सम्म भने नेपालमा यौटा विवाह भएर यौटा सन्तान समेत भएका महिला हरु कागज पत्र मिलाएर हंकड• या अष्ट्रेलिया गैसकेपछी पिआर लिनलाई सात वर्ष अर्कैकी श्रीमती भएर बस्दा त्यता पनि सन्तान जन्माउन बाध्य पारिएका या रहरले नै दोश्रो लोग्ने तर्फ बाट पनि सन्तान जन्माएर पनि दुबै तिरको सम्वन्ध जोगाएरै राख्न बाध्य पारिएका महिला हरु पनि रहेको यथार्थ जानकारीमा आयो । त्यो अवस्था कति बाध्यकारी अथवा कति रहर द्वारा श्रिजीत हो अथवा स्वतन्त्रताको उपभोग हो सम्वन्धीत हरुलाई नै थाह होला ।
स्थाई बसोबास अनुमती पत्र (पिआर) बनेपछी सात वर्ष संगै बसेको कागजी लोग्ने छोड्दा नयाँ लोग्ने संगको सहवास बाट जन्मीएको सन्तानको कारण नेपालमा रहेको लोग्ने संग स्वत: छुटेपछी पुन: अर्को विहे गरेका र त्यो अर्को विहे गरेको लोग्ने ले अर्को सात वर्ष पछी श्रीमती को नामबाट पिआर पाईसकेपछी फेरी उनलाई छोड्दा तिन वटा लोग्ने फेरीएको अवस्था मा पुगेको परिस्थीती पनि देखीयो । यसरी लेग्ने फेरीदा तिनै वटा लोग्ने संग बच्चो जन्माउने महिला पनि रहेछन विदेशमा । जसले सम्मान पुर्वक तियहाको समाजमा आफ्नो दमदार उपस्थीती जनाई रहेछीन । अझ तिनै महिला अव अर्को विहेको खोजीमा भएका समेत देख्न पाईयो ।
नेपाली समाजको आँखा बाट हेर्दा यहा सम्म पिडीत महिला सम्म रहेको चर्चा सुन्न पाईयो की - पहिला एका सगोलका दाजुभाई मध्ये भाई संग विहे भयो । कारण वस लोग्ने संग छुट्नु पर्यो या दुर्घटना वस लेग्नेको मृत्यु भयो । अनी कागजी प्रकृया पुरा गरी आफ्नो लेग्नेको सगोलकै सहेदर एउटै घरका दाजु लाई लोग्ने मानेर सात वर्ष सम्म उसको (जेठाजुको) श्रीमती भएर वसीसकेपछी जेठाजु ले पुन: छाडेर अर्को विहे गरेको कारण फेरी एक्लै भएको अवस्थामा रहेका महिला हरु पनि देख्न पाईयो ।
कागजी रुपमा आफ्नै सहोदर दाजु बहिनी या दिदी भाई हरुपनि लोग्ने स्वास्नी भएर बस्न परेको देखीयो । खाली स्थाई बसोबास अनुमती पत्रको लागी आफ्नै दाई की स्वास्नी भएर अथवा आफ्नै सहोदर बहिनीको लोग्ने भएर बस्नु पर्दाको अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त उनिहरुलाई नै थाह होला ।
अचम्मको कुरो त के लाग्यो भने त्यसरी तिन तिन वटा लोग्ने संग बच्चा जन्माएर पनि सामाजीक संजालमा तिनीहरुकै चरित्र सम्वन्धी स्वर चर्को देखीन्छ । उनिहरु लै एक आपसमा तछाड मछाड गरेर चरित्र सम्वन्धी वहस गरिरहेका हुन्छन । सरासर बुझ्दा कस्तो लाग्यो भने पैसा कमाई हुने देशमा जतिजनाकी स्वास्नी हुनुपरेपनि ति महिला पिडीत हुदैनन । नेपालमा त्यती गर्न पर्ने अवस्था भए के हुदो हो ...!!!नेपालमा भए यो पिडा अदालतमा पुगीसक्थ्यो महिला अधिकार कर्मीले उसको बलात्कार भएको भनिसक्थे ! किनकी त्यहा यो सब परिस्थीती बाट गुज्रदा पैसा कमाई हुदैन , हंकड•मा पैसा कमाई हुन्छ । पैसा नै रैछ अदालत पैसा नै रैछ महिला अधिकार र न्याय पनि ...!
पैसा कमाई हुने भएपछी जस्तो सुकै सम्वन्ध पनि चोखो देख्छ समाज । अमेरीका मा देह ब्यापार गरेर कमाई गरेपनि देशको ईज्जत अनुसार त्यो पैसाको वजन बेग्लै हुन्छ । हंकड• र अष्ट्रेलिया अनी जापान मा जतिजना सुकै कागजी लोग्ने बनाएर फेरी फेरी सहवास गरेपनि ति चेली चरित्रवती नै ठहरिन्छीन हाम्रो समाजको नजरमा । किनकी त्यहा त्यसो गरे बापत मनग्य आमदानी हुन्छ । तर नेपालमा परपुरुष संग मस्केर बोल्ने महिला विटुली हुन्छीन त्यही समाजको नजरमा । खाडीमा श्रम गर्न गएका दिदीबैनी त झन खत्तमै हुन्छन त्यही समाजको नजरमा ! वाह रे हाम्रो समाज युरोपमा आधा दर्जन लोग्ने फेरेकी महिला चोखै हुन्छीन तेरो नजरमा खाडी बाट पुरुषको मुखै नहेरी फर्केकी महिला कलंकीनी हुन्छीन तेरै नजरमा ! नेपालमा होटलमा काम गर्ने होटल वाल्नी हुन्छे तेरो नजरमा । परिस्थीती बस लोग्ने फेरीनु परे वेश्या हुन्छीन तिनै नारी तेरो नजरमा । के विकसीत देशमा गरिएका सबै कर्महरु चरित्र भन्दा माथी हुने हो ? जवाफ दे समाज ...!!
~दुर्गा पंगेनी !
पैसा र पिआर ले पखालेको चरित्र Reviewed by Jamarko TV on जुलाई 12, 2016 Rating: 5